Thwebula McAfee LiveSafe 14.0.4121 – Vessoft
Thwebula McAfee LiveSafe
McAfee LiveSafe – isofthiwe unqulo wesi arab kuphela elisebenzisa izixazululo eziphambili emkhakheni ukuzivikela. Isofthiwe kuqinisekisa ukuvikeleka kwemininingwane eyimfihlo noma olunye ulwazi esebenzisa ezimbili-indlela firewall kanye esizukulwaneni esilandelayo core isithwebuli. McAfee LiveSafe uyakwazi ukuvikela kokuhlala internet, uvimbele spam e mail amasevisi, ukuvikela hardware kanye software. Isofthiwe uphawula links imiphumela yosesho izithombe ezikhethekile lapho ukwazisa umsebenzisi mayelana degree kwabo engozini. McAfee LiveSafe kusekela isevisi ukuphathwa ukuvikelwa Amadivayisi lomsebenzisi usebenzisa nemisebenzi emibili-isigaba ukuqinisekiswa ukusebenza kanye esikhundleni amaphasiwedi lula noma esiqhubekayo. Futhi isofthiwe iqukethe sabazali control module enikezela zokuhlunga okuqukethwe nokuhlela ukusetshenziswa traffic.
Complex zokuvikelwa kokwaziswa
Scan Quick of the system ngesikhathi sangempela
Hlala uphephile ku-internet
Ulwazi mayelana degree of links ingozi
Module of control kwabazali
Amazwana on McAfee LiveSafe:
McAfee LiveSafe Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... SmadAV 11.0.4
English, Español, Deutsch, Italiano... Protected Folder 1.2